Bayern Munich Oo Ka Walwalsan Dhaacawa Thiago Alcantara | Radio laascanood
Bayern Munich Oo Ka Walwalsan Dhaacawa Thiago Alcantara
Published on September 4, 2014 by radiolaa · No Comments
Kooxda Bayern Munich ayaa ka walwalan xaalada dhaawaca xidiga khadka dhexe ee Thiago Alcantara kaas oo dhaawac ku maqnaa ilaa bishii march. Alcantara ayaa ku dhaawacmay kulankii ay Baryern barbaraha 3:3 da ah la gadhay kooxda Hoffenheim bishii March kulankaas oo ku tirsanaa horyaalka Jarmalka ee Bundesligaha.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Bayern Matthias Sammer ayaa qirtay inay kooxdiisu ka walwalsan tahay xaalada dhaawac ee Alcantara. Thiago ayaa dhawacan awgii ku seegay tartankii koobka aduunka ee Brasil lagu qabtay.
Thiago ayaa markii hore la filaayay inuu xili ciyaareedka cusub ee 2014/15 diyaar u noqon doono balse 23 jirkan ayuu dhaawihiisu qaatay waqti ka badan sidii markii hore la filaayay . Thiago ayuu dhaawacani ka soo gaadhay jilibka.
Agaasimaha Bayern ee Sammer ayaa isagoo arinta Thiago ka hadlaya yidhi: “Xaqiiqdii ma sheegi karno waqtiga uu Thiago kaga soo bogsan karo dhaawacan. Suurtogal maaha inaanu taariikh sheegnaa uu Thiago ku soo laabanayo, kani waa horumar aad looga qoomamoodo”.
Thiago ayaa Bayern kaga soo biiray dhinaca kooxda Barcelona xagaagii sanadkii 2013, wuxuuna la dhibaataysan yahay dhaawacyo soo gaadhay. Thiago ayaa kooxda Bayern u saftay 25 kulan, wuxuuna u dhaliyay 3 gool oo tartamada oo dhan ah. Bayern ayay sidoo kale ka maqan yihiin Javi Martinez iyo Bastian Schweinsteiger.
wararkii hore	FIFA oo diiday racfaankii ay qaadatay kooxda Barcelona.	August 20, 2014 Barcelona ayaan awoodi doonin inay ciyaaryahano lasoo saxiixato ilaa bisha January 2016ka marka uu xirmo suuqa kala iibsiga ...	Arsenal Oo Ku Dhaw Inay Soo Gabagabayso Saxiixa Adrien Rabiot.	August 20, 2014 Kooxda Arsenal ee dalka ingiriiska ayaa ku dhaw inay soo gabagabayso saxiixa da,yarka qadka dhexe uga ciyaara PSG ...	Chelsea Oo Guul Raaxoleh Ku Bilaabatay Horyaalka Ingiriiska	August 19, 2014 Jose Mourinho iyo kooxdiisa Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ku bilabatay guul ay u qalantay kadib ciyaar ay iskaga ...	Falanqaynta Kulanka Isreeb Reebka Champions League Ee Besiktas v Arsenal.	August 19, 2014 Kooxda Besiktas oo dhawaantaan lawareegtay laacibiin uu ka mid yahay weerar yahankii Chelsea iyo Newcastle Demba Ba ayaa ...	Marcos Rojo Oo Sheegay Inuu Dhamaystiray Wareegista Man United	August 19, 2014 Difaaca kooxda Sporting Lisbon iyo xulka qaranka Argentina eeMarcos Rojo ayaa Sheegay inuu dhamaystiray Wareegista Man United, isagoo ku ...	Wenger Oo Sheegay Inay Arsenal Usoo bixidoonto Champions Leaquega waxkasta Ha Ku Qaadatee	August 18, 2014 Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay inay Arsenal usoo bixidoonto horyaalka Yurub ee Champions Leaquega waxkasta ha ...	Copyright © 2014 radiolaascanood.net> All Rights Reserved. login radiolaascanood@gmail.com